USB Flash Drive JF360F
32000 Ks Capacity :
COMMENTS ဝင်ရန် to comment Show More ဆိုင်နာမည်
ရောင်းချသော ပစ္စည်းစုစုပေါင်း (137)
တွဲဖက်ဝယ်သင့်ယူသော ပစ္စည်းများ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကုန်ပစ္စည်းများ
➃ပစ္စည်းဘယ် အချိန်ရောက်မှာလဲ? ပစ္စည်း Order များ နေ့ခင်း (၁) နာရီ တွင် ပိတ်ပါသည်။ Order မပိတ်ခင် မှာယူသူများ ကို ရန်ကုန်မြို့ တွင်း နေ့ခြင်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး နယ်မြို့ များအတွက် ကားဂိတ်များသို့ နေတွင်းခြင်း ပို့ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နေ့ခင်း (၁) နာရီ နောက်ပိုင်း မှာယူသော ပစ္စည်းများအနေဖြင့် နောက်တနေ့ မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း (သို့မဟုတ်) ကားဂိတ်သို့ ပစ္စည်းရောက်ပါမည်။ ဈေးဝယ်ခြင်း ကို အချိန်အရွေး နေရာမရွေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
Payment Methods : Follow :
This isasingle-page Bootstrap template withasleek dark/grey color scheme, accent color and smooth scrolling.
There are vertical content sections with subtle animations that are activated when scrolled into view using the jQuery WOW plugin. There is alsoagallery with modals
that work nicely to showcase your work portfolio. Other features includeacontact form, email subscribe form, multi-column footer. Uses Questrial Google Font and Ionicons.